Windows 10: Mee ọ rụọ ọrụ Samba iji jikọọ akụrụngwa na GNU / Linux | Site na Linux
Windows 10: Kwado Samba iji jikọọ akụrụngwa na GNU / Linux
Kedu ka o si bụrụ ihe ọha na eze na oke ọmụma, Samba bụ ọrụ ngwanrọ n'efu na-enye ohere mmejuputa iwu nke Usoro nkwekọrịta faịlụ Windows, na Sistemụ arụmọrụ nke ụdị UNIX, karịsịa ndị nwere onwe ha ma na-emeghe dị ka GNU / Linux.
Samba gbagote Windows 7 nyeere na ndabara. Mana site n'oge ahụ gaa n'ihu, ya bụ, na mbipute gara aga Windows 8.X, na nke dị ugbu a, Windows 10, ọ ga-arụ ọrụ ya aka iji mee ka a akụ akụrụngwa na ntanetị site na Kọmputa na ndị a Operụ Ọrụ Nkeonwe, achọpụta na jikọọ na kọmputa na GNU / Linux. Kedu ihe kpatara na ọ dị mkpa ịmata usoro iji megharịa ya ma mezuo ebumnuche a.
Protocol Samba mara dika SMB (Ogwe Ozi Ozi), na ụfọdụ akwụkwọ ọgụgụ dị ka CIFS (Sistemụ Njikwa Commonntanetị na-adịkarị), karịrị nanị ikwe ka kọmputa na GNU / Linux, Mac OS X ma ọ bụ Unix Na mkpokọta, ha nwere ike ịkekọrịta ma ọ bụ nweta akụrụngwa na netwọkụ ndị dabeere na Windows, ọ bụ n'ezie, ụlọ nke ngwa Unix na-emejuputa SMB protocol, nke ejiri ya arụmọrụ ahịa-sava na netwọk.
N'ụzọ dị otú a, kọmputa Unix ma ọ bụ yiri na Samba i nwere ike tinye a Microsoft netwọk, na-egosi onwe ya dika Server na / ma ọ bụ Onye ahịa, ma si otú a nwee ike:
Lelee ma nyochaa kọmpụta ndị ahịa na netwọkụ, iji kwado mmekọrịta na mmekọrịta ha na ha.
Kesaa ma nweta ihe ntanetị, dị ka folda, faịlụ, ma ọ bụ ngwaọrụ dị ka diski, ndị na-ebi akwụkwọ, nyocha, na MFP.
Ikwado nkwenye nke ndị ahịa kọmputa site na aha nnabata megide ngalaba Windows.
Kwe ka mmeko na mwekota na Aha Resolution Server (WINS) na netwọkụ Windows.
N'ikpeazụ, tupu ịmalite banyere isiokwu ahụ, cheta nke ahụ Windows 10, bụ ihe kachasị ọhụrụ na nke dị elu Sistemụ nrụọrụ Microsoft, si na 29 2015 XNUMXmgbe Windows 7 si 14 de enero de 2020, enwebeghị Ndị ọrụ kwadoro nkwado. Mgbe, Windows 8.1 ga-ata ahụhụ otu ihe ahụ, si na 10 de enero de 2023.
Ya mere, ma ọ bụ ha dochie n'efu na Sistemụ arụmọrụ na-emeghe ma na-emeghedị ka GNU / Linux, ma ọ bụ ị ga-akwụ ụgwọ iji kwalite ka Windows 10 ma nwee nkwado gọọmentị.
1 Otu esi eme ka ndi Samba rụọ ọrụ na Windows 10 iji jikọọ akụrụngwa akọrọ na GNU / Linux?
1.1 Kwuru na nkwanye
1.2 Nzọụkwụ 1
1.3 Nzọụkwụ 2
1.4 Nzọụkwụ 3
1.5 Nzọụkwụ 4
1.6 Nzọụkwụ 5
Otu esi eme ka ndi Samba rụọ ọrụ na Windows 10 iji jikọọ akụrụngwa akọrọ na GNU / Linux?
Kwuru na nkwanye
Maka ọmụmụ ihe anyị, anyị ga-eji ya 2 kọmputa nkịtị, otu onye Windows 10 na onye ọzọ na MX Linux 19.1 (DEBIAN 10) na netwọk ụlọ, ya bụ, na-enweghị sava netwọk. Naanị a Rawụta na-ekenye ndị Adreesị IP n'ụzọ dị omimi.
Ọ bụ ezigbo na kọmputa na Windows 10 nwee a Aha otu y Otu ọrụ / Aha ngalaba gh, ie obere, legible na mfe icheta, ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa ma ọ bụ na o kwere omume. Ma dị ka o kwere mee, na Otu ọrụ / Aha ngalaba bụ otu ihe ahụ na ahazi na kọmputa na GNU / Linux.
Hazie Aha Kọmputa na Workgroup / Aha ngalaba
Na-eche na Network Ọrụ Group aha site na kọmputa na GNU / Linux Oké osimiri Homelọ, ị ga-agarịrị Kọmputa na Windows 10, kwụsị na akpọ taabụ "Otu aha" site na windo "Njirimara usoro", enweta site na nhọrọ nke Ogwe njikwa oku «Advanced Equipment nhazi», mee mgbanwe ahụ, dị ka egosiri na oyiyi ahụ ozugbo n'okpuru.
You gaghị enwe ike ịme mgbanwe abụọ ahụ n'otu oge, ya bụ, ị ga-agbanwerịrị ya "Otu aha" mbụ na Malitegharịa ekwentị, na mgbe ahụ, aha «Otu ọrụ " netwọk na reboot.
Kwado njirimara SMB1.0 / CIFS na Windows 10
A nzọụkwụ ị ga-enweta na "Atụmatụ Windows" n'okporo ụzọ "Ogwe njikwa", "Mmemme" na "Mmemme na Akụkụ". Ozugbo e, ị ga-pịa (rụọ ọrụ) igbe kwekọrọ na "Nkwado maka protocol nkekọrịta SMB 1.0 / CIFS".
Mgbe ahụ ị ga-pịa bọtịnụ ahụ "Mee ọ rụọ ọrụ", dị ka e gosiri na foto ozugbo n'okpuru. Ọkacha mma, ekwesịrị ịmaliteghachi ya maka mgbanwe ndị a ga-anabata nke ọma.
Ọ bụrụ na ọ chọrọ, na igbe nke "SMB kpọmkwem" maka nkwado dị elu (ojiji) nke protocol.
Nyochaa ma kwado nkwado maka SMB 1.X / 2.X / 3.X site na Shell Windows Power
Detectchọpụta ma rụọ ọrụ / deactivate via Shell Ike Windows, nke Samba network protocol site Windows 10, nwere ike ime iwu ndị a maka ikpe ọ bụla:
Maka ọmụmụ ihe anyị, a na-arụ ọrụ abụọ ahụ, ya bụ, SMB 1.0 na SMB 2.X / 3.X na iji ngwa "Windows PowerShell ISE" dị ka "Onye nchịkwa", nke bụ nke gosipụtara na onyonyo ahụ n'okpuru.
Maka ọmụmụ ihe anyị, a ga-emepụta folda a na-akpọ "Ihe Nlereanya" na mgbọrọgwụ nke Sistemụ arụmọrụ Windows 10 eji, ebe aha ya Onye ọrụ ka emepụtara "Ogechukwu" ("Nlekọta", dịka onye nyocha faịlụ dị n'okporo ụzọ "C: \_ Ọrụ \_ Admin". Ekwesịrị ịmepụta akụ na ụba akọrọ, ọkacha mma yana mgbakwunye nke Onye ọrụ "Onye ọ bụla" ya na ikikere nche niile dị mkpa, ma kesaa n'okwu a, na otu aha na netwọk ahụ, ya bụ, "Ihe Nlereanya".
Dị ka e gosiri na foto ndị na-esonụ:
Aha njirimara Sysadmin: Admin
Niile Ọrụ Onye Ọrụ na Ikike Ikike: na folda «Ihe Nlereanya»
Ọrụ nke aha netwọk "Ihe Nlereanya": maka òkè.
Ihe ngosi ntanetị: site na Windows 10
Jikọọ òkè na kọmputa na GNU / Linux
Maka nke a, site na kọmputa a na-akpọ "VITP2413" anyị ga-emeghe a Njikwa Explorer na nke anyị GNU / Linux Sistemụ nrụọrụ, iji jikọọ site na Samba na ịkọrọ "Ihe Nlereanya" emi odude ke kọmputa "ỌR" " que tiene Windows 10, dị ka e gosiri na foto ndị na-esonụ:
Na-agba ọsọ File Explorer: iji gbaa uzo ntaneti "Smb: // vit / atụ" kwupụta na-akọrọ akụ na Computer na Windows 10.
Windows 10 Ntọala Oke Ntọala: maka njikọ samba.
Kekọrịta ngosi: na Windows 10 akpọrọ "Ihe Nlereanya" na GNU / Linux.
N'ikpeazụ, maka ozi ndị ọzọ gbasara isiokwu a, ị nwere ike ịnweta ya Njikọ gọọmentị Microsoft gbasara ya.
Anyị na-atụ anya nke a "bara uru obere post" banyere «¿Cómo activar el Servicio de Samba en Windows 10 para conectar recursos compartidos en GNU/Linux?», nke bụ ihe dị mkpa oru ọrụ ịrụ, ugbu a «Windows 7», ọ bụ agaghịkwa na anụ version na na ukara nkwado nke «Microsoft»bụrụ otutu mmasị na ịba uru, Maka ihe niile «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» na nke onyinye dị ukwuu na mgbasa nke obibi dị ebube, gigantic na eto eto nke ngwa nke «GNU/Linux».
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Windows 10: Kwado Samba iji jikọọ akụrụngwa na GNU / Linux
Camilo Gomez A. dijo
N'ezie, ihe Windows 10 anaghị arụ ọrụ na ndabara bụ smb1, nke maka ihe nchekwa na-atụ aro ka ị ghara iji ya. Mana smb (cifs) protocol ka dị nkịtị. Ihe ziri ezi bu ime ka ojiji nke smb2 na smb3 na nhazi Samba na igwe Linux nke m choro inye nchekwa
Zaghachi Camilo Gómez A.
Daalụ Camilo! Daalụ maka okwu gị na nkọwapụta nke isiokwu a tụlere.
Gonzalo Montes de Oca dijo
Enwere ike ịnweta folda Windows na Linux na iwu na-esote: Mount -t cifs // ip / resource / mount_point -o domain = domain, username = user
A ga-eji oke "ngalaba" ma ọ bụrụ na kọmputa Windows dị na ngalaba ndekọ Ọrụ.
Zaghachi Gonzalo Montes de Oca
Daalụ Gonzalo! Daalụ maka nkọwa gị na onyinye gị n'okwu a tụlere. Mgbe ụfọdụ, ọ ka mma ime njikọ site na ọnụ karịa site na eserese.
Igwe ojii na-emepe emepe na-arụ ọrụ na patches iji mee ka izo ya ezo na Linux